Ithini indima ka-Immunoglobulin G (Igg) kuMzimba woMntu?
I-immunoglobulin (anti antibody), yi molekyuli ye-glycoprotein eveliswa ziiseli ezimhlophe zegazi. Ii-antibodies ze-immunoglobulins zidlala indima ebalulekileyo ekufumaneni nasekuzinamatheleni kwii-antigen ezithile ezinjengebhaktiriya kunye nentsholongwane. Ezi antibodies zinegalelo ekutshatyalalisweni kwezo ntsholongwane. Ngokwenjenje, zenza into ebalulekileyo yokuphendula kumzimba.
Kukho iintlobo ezintlanu eziphambili ze-Immunoglobulin kwizilwanyana ezanyisayo, kuxhomekeka ekulandelelaneni kwe-amino acid kuboniswe kwingingqi ye-antibody heavy chain. Babandakanya i-IgA, IgD, IgE, IgG kunye ne-IgM antibodies. Nganye kwezi ntlobo ze-antibody inesakhiwo esahlukileyo, ngenxa yoko umsebenzi ohlukileyo kunye nokuphendula kwii-antigen.
Ii-antibodies ze-IgA ikakhulu zibekwe kwiindawo ezinobuthathaka kakhulu bomzimba eziveza izinto zangaphandle zangaphandle. Ezi ndawo zibandakanya impumlo, indlela yomoya, indlela yokugaya ukutya, ubufazi, iindlebe, kunye nomphezulu wamehlo. amathe, iinyembezi, kunye negazi ziqulathe ii-antibodies ze-IgA
Kwelinye icala, ii-antibodies ze-IgG zikhona kulo naluphi na ulwelo emzimbeni. Ii-antibodies ze-IgM zifumaneka kuphela kwi igazi kunye ne-lymph fluid.
Ii-antibodies ze-IgE zibekwe ngaphakathi kwimiphunga, ulusu, kunye nolusu lwe-mucous. Okokugqibela, ii-antibodies ze-IgD zifumaneka esiswini nakwisisu sesifuba.
Apha, siza kugxila kwi-IgG.
Yintoni i-Immunoglobulin G (IgG)?
I-Immunoglobulin G (IgG) yi-monomer; olona hlobo lwento elula anti anti Serum yomntu. Ngaphandle koko, ukubalwa kwe-75% yayo yonke i-immunoglobulin emzimbeni womntu, luhlobo oluphambili lwe-immunoglobulin ebantwini.
Iiseli ezimhlophe zegazi zikhupha ii-antibodies ze-IgG ngohlobo lwento yesibini yokuphendula komzimba ukulwa ne-antigen. Ngenxa yokubekwa phambili emzimbeni womntu kunye nokucaciswa okukhulu kwe-antigen, i-IgG iluncedo kakhulu kwizifundo ze-immunological kunye nokuqonda isifo sesayensi. Isetyenziswe njengogonyo oluqhelekileyo kwimimandla yomibini.
Ngokubanzi, i-IgG zii-glycoproteins, nganye inamakhonkco amane e-polypeptide aneekopi ezimbini ezifanayo kuzo zonke iintlobo ezimbini zemixokelelwane ye-polypeptide. Iindidi ezimbini ze-polypeptide chain zilula (L) kwaye zinzima, i-gamma (γ). Zombini zixhunyiwe kukungasebenzi komxokelelwane kunye nokunganyanzelisi amandla.
Umahluko phakathi kwee-molecule ze-immunoglobulin G zivela ngokulandelelana kwazo kwe-amino acid. Nangona kunjalo, ngaphakathi kuyo nganye molekyuli ye-IgG nganye, ezi zibini ze-L azinantlonelo, icala elinye kunye namakhonkco e-H.
Indima ephambili yemolekyuli ye-IgG kukudala ingxabano phakathi kweesistim zomzimba zomntu kunye ne-antigen.
Zingaphi izinto ezingaphantsi kwe-Immunoglobulin G (IgG)?
I-Immunoglobulin G (IgG) iqulethe imizimba emine engafaniyo ngokungqinelana nenombolo ye-bond engapheliyo kunye nobude bendawo yehinge kunye nokuguquguquka. Ezi ziqingqiweyo zibandakanya i-IgG 1, IgG 2, IgG 3 kunye ne-IgG 4.
IgG1 akhawunti malunga ne-60 ukuya kwi-65% ye-IgG ephambili. Ngamanye amagama, yeyona isotope ixhaphakileyo kwi-serum yomntu. Ngokukodwa, le klasi ye-immunoglobulin ityebile kwii-antibodies ezinceda ukulwa neeproteni eziyingozi kunye ne-polypeptide antigen. Umzekelo weprotein i-IgG 1 echasayo yidiphtheria, ityhefu yebhaktiriya enesifo kunye neeproteni zentsholongwane.
Abasandula ukuzalwa banenqanaba elilinganisekayo lokuphendula kwe-IgG1 immune system. Ngexesha lokukhula kobuntwana apho impendulo ifikelela kwisiseko sayo esiqhelekileyo. Ngaphandle koko, ukusilela ekufezekiseni uxinzelelo kwinqanaba lelo luphawu lokuba umntwana unokuba nesifo se-hypogammaglobulinemia, isifo sokungabikho komzimba ngenxa yesifo esilinganayo kuzo zonke iintlobo ze-gamma globulin.
immunoglobulin g subclass 2 iza okwesibini ngokwemigaqo yeyona isotopes ziqhelekileyo kwis serum yomntu. Inika malunga ne-20 ukuya kwi-25% ye-Immunoglobulin G. Indima ye-immunoglobulin g subclass 2 kukunceda amajoni omzimba alwe ne-polysaccharide antigens like I-Streptococcus inyumonia or Haemophilus influenzae.
Umntwana ufikelela kwinqanaba eliqhelekileyo "labantu abadala" le-immunoglobulin g subclass 2 xa eneminyaka emibini okanye esixhenxe ubudala. Ukusilela kwe-IgG2 kubonakaliswa sisifo senkqubo yokuphefumla rhoqo kwaye kuxhaphake kakhulu phakathi kweentsana.
Ngokufanayo, kwi-IgG 1, ii-isotopes ze-Immunoglobulin G ezingaphantsi kwe-IgG3 zityebile kwii-antibodies. Ezi antibodies zinceda impendulo yokulwa izifo ukuze yoyise iproteni eyingozi kunye ne-antijeni ye-polypeptide emzimbeni womntu.
I-5% ukuya kwi-10% ye-IgG iyonke emzimbeni womntu luhlobo lwe-IgG3. Nangona kunjalo, nangona bengaphantsi kakhulu xa kuthelekiswa ne-IgG1, ngamanye amaxesha i-IgG3 inobuhlobo obuphezulu.
Ipesenti ye-IgG 4 ye-IgG iyonke ihlala iyi-4%. Kuyakufuneka nokuba uqaphele ukuba le subclass ye-Immunoglobulin G ifumaneka ngokwenqanaba eliphantsi kakhulu phakathi kwabantwana abangaphantsi kweminyaka eli-10. Ngenxa yoko, kufunyaniswa ukuba unesifo i-immunoglobulin g subclass 4 kunokubakho kuphela kubantwana abaneminyaka elishumi nangaphezulu ubudala .
Nangona kunjalo, izazinzulu azikakwazi ukubona owona msebenzi ngqo we-immunoglobulin g subclass 4. Ekuqaleni, izazinzulu zidibanise ukusilela kwe-IgG4 kukutya okungekuko.
Nangona kunjalo, uphando olwenziwe kutshanje lubonisa ukuba abaguli abane-sclerosing pancreatitis, pneumonia yangaphakathi okanye i-cholangitis yayinamanqanaba aphezulu e-serum ye-IgG4. Ke, iziphumo zophando zisele zididekile malunga nendima eyiyo immunoglobulin g subclass 4.
Ii-immunoglobulins ezabelana nge-subclass efanayo zinokulingana okungama-90% kufundo lwasekhaya, ingathatheli ingqalelo imimandla yazo eguqukayo. Kwelinye icala, ezo zeendawo ezahlukeneyo ezincinci zabelana kuphela nge-60% efanayo. Kodwa ngokubanzi, amanqanaba oxinzelelo lwazo zone i-IgG subclass zitshintsha kunye nobudala.
I-Immunoglobulin G (Igg) Imisebenzi kunye neziBonelelo
Ii-antibodies ze-IgG zidlala indima ebalulekileyo kwimpendulo yesibini yokulwa izifo njengoko i-IgM antibody ikhathalela impendulo ephambili. Ngokukodwa, i-immunoglobulin g antibody igcina ukosuleleka kunye nobungozi emzimbeni wakho ngokubopha ii-pathogen ezinjengeentsholongwane, iibacteria kunye nefungi.
Nangona iyeyona nto ichasene negazi, ininzi kakhulu emzimbeni wesilwanyana, kubandakanya ezomntu. ibala ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-80 zayo yonke into engasasebenziyo emzimbeni womntu.
Ngenxa yesakhiwo sayo esilula, i-IgG iyakwazi ukungena kwi-placenta yomntu. Ngapha koko, alikho elinye iklasi le-Ig elinokwenza oku, ngenxa yezakhiwo zazo ezinzima. Kananjalo, idlala indima ebaluleke kakhulu ekukhuseleni umntwana osandul 'ukuzalwa ngexesha leenyanga zokuqala zokukhulelwa. Esi sesinye sezibonelelo eziphambili ze-immunoglobulin g.
Iimolekyuli ze-IgG ziphendula ii-recceptors ze-Fc present ezikhoyo kwi-macrophage, neutrophil kunye neeseli zemvelo ezibulala iiseli ebusweni, zizinike amandla. Ngaphandle koko, iimolekyuli ziyakwazi ukuvuselela inkqubo yokuhambelana.
Inkqubo yokudibanisa iyinxalenye yomzimba wokulwa izifo kwaye inendima yayo enkulu kukwenza umthamo weeseli zomntu kunye ne-phagocytic ekususeni iintsholongwane kunye neeseli ezenzakeleyo emzimbeni womntu. Le nkqubo ikwaphucula amandla e-antibodies kunye neeseli ukutshabalalisa ulusu lwee pathogens kwaye zibenze bazithebe. Esi sesinye sezibonelelo ze-immunoglobulin g.
Umzimba wakho uvelisa i-anti-immunoglobulin g antibody ekuphenduleni okulibazisekileyo ukuthintela usulelo. Umzimba ungawugcina lo anti anti ixesha elide ukuze uncede ekulweni kuphela ii-pathogens ezinoxanduva losulelo kodwa futhi usebenze ngokususa ezonakalisiweyo kwinkqubo yakho.
Ngenxa yonyamezelo oluphezulu lwe-serum, i-IgG zezona zinto zisebenzayo ezichasene nokugonywa. Ngenxa yoko, i-IgG ikakhulu iluphawu lokuba unosulelo okanye ugonyo kutsha nje.
Ukusetyenziswa kwe-IgG Powder kunye nokuSebenzisa
Umgubo we-IgG sisongezelelo sendlela yokutya esisebenza njengomthombo osisityebi we-immunoglobulin G (IgG). Inika eyona nto igxilwe kakhulu kwi-IgG ukunceda umzimba wakho ube nempendulo yokuthintela amandla omzimba, ngakumbi ukuba uneengxaki ezinxulumene rhoqo ne-allergen.
Elinye lezithako eziphambili ze-IgG Powder yi-bovine colostrum enikezela uluhlu olupheleleyo lwendalo ezenzeka ngokwendalo. Ezi immunoglobulins zikhethekileyo kwi-antibodies yabantu, kubandakanya i-Immunoglobulin G (IgG). Ke ngoko, i-immunoglobulin g colostrum yeyona ndlela isebenzayo yokwandisa amajoni omzimba omntu ukulwa nezifo.
Nge-immunoglobulin g colostrum njengecandelo layo eliphambili, i-IgG Powder inokubonelela nge-2,000 mg ye-IgG ngokukhonza. Umgubo uya kubonelela ngomzimba wakho ngeprotheni (4 g ngokukhonza)
Ngokukodwa, i-immunoglobulin g colostrum kwipowder iye yavavanywa yaze yangqinwa ukunceda abantu ekugcineni amajoni omzimba omelele. Ukufezekisa oku ngokubopha uluhlu oluninzi lwee-microbes kunye ne-toxin ekwi-gut lumen.
Ke ngoko, izibonelelo ze-immunoglobulin g zibandakanya:
Ukuphuculwa komzimba okuguquliweyo
Isithinteli se-gut-immune (GI) isithintelo
Ulondolozo olungeleleneyo lokuvuvukala
Inkxaso yempilo yomzimba yokuzalwa
Ukhuselo lwe-Mucosal immune boost, ngenxa yokufumana okungahambelani ne-allergenic ukuhanjiswa kwe-Immunoglobulin
Ukulondolozwa komgangatho osetyenziswayo we-Microbial
Akukho ngqo ithamo lomgubo we-IgG eqinisekiswe ngokwesayensi ukuba yeyona ilungileyo. Nangona kunjalo, iingcali zezempilo zicebisa ukuba i-scoops enye okanye ezininzi zeepoda ngosuku zilungile. Yongeza umgubo we-IgG kwii-ounces ezi-4 zamanzi / isiselo sakho osithandayo okanye njengoko kucetyiswe ngugqirha wakho.
Ukushokoxeka kwe-Immunoglobulin G (Igg)
An I-Immunoglobulin G (IgG) ukusilela kubhekiswa kwimeko yempilo ebonakaliswa kukungafikeleli kwe-Immunoglobulin G ngumzimba. Xa umntu enesiphene se-IgG, usemngciphekweni owongezelelekileyo wokosuleleka ngenxa yokuba amajoni omzimba abuthathaka.
Ngelishwa, ukusilela kwe-immunoglobulin g kunokukuchaphazela ngalo naliphi na ixesha ebomini bakho, akukho minyaka iyaxolelwa kule meko.
Akukho mntu ukwazile ukufumanisa oyena nobangela wokuphelelwa ngamandla kwe-immunoglobulin g. Nangona kunjalo, kukrokrelwa ukuba iyinto enxulumene nemfuzo. Kwakhona, iingcali kwezonyango zikholelwa ukuba kukho amayeza kunye neemeko zonyango ezinokubangela ukusweleka kwe-IgG.
Ukuchongwa kwe-immunoglobulin g ukusilela kuqala ngokuthatha uvavanyo lwegazi ukuvavanya amanqanaba e-immunoglobulin. Ke olunye uvavanyo oluntsonkothileyo olubandakanya umlinganiso wenqanaba lokudalwa kwamalungu ukuvavanya impendulo yomzimba kugonyo oluthile lwenziwa kumntu okrokrelwa ukuba unale meko.
Iimpawu zokushokoxeka kwe-Immunoglobulin G
Umntu onesifo i-immunoglobulin g uya kuthi abonise ezi mpawu zilandelayo:
Izifo zokuphefumla ezifana nosulelo lwe-sinus
Usulelo lwenkqubo yokugaya
Usulelo olubangela umqala obuhlungu
Ukosuleleka kakhulu kwaye kusenokwenzeka ukubulala (kwiimeko ezinqabileyo)
Ngamanye amaxesha, usulelo olungentla lungaphazamisa imisebenzi yesiqhelo yomoya kunye nemiphunga. Ngenxa yoko, amaxhoba afumana ubunzima bokuphefumla.
Elinye inqaku ekufuneka uliqaphele ngezi zifo zibangelwa kukusilela kwe-IgG kukuba banokuhlasela nkqu nabantu abo bagonyelwe umhlaza kunye nomkhuhlane.
Ukunyanga ukusilela kwe-IgG?
Unyango lokushokoxeka kwe-IgG ineendlela ezahlukeneyo, nganye ixhomekeke kubukhali beempawu kunye nosulelo. Ukuba iimpawu zithobekile, kuthetha ukuba bayakuthintela ekuqhubekeni nemisebenzi / imisebenzi yakho eqhelekileyo, unyango kwangoko lunokwanela.
Nangona kunjalo, ukuba usulelo luqatha kwaye luhlala rhoqo, unyango oluqhubekayo kunokuba sesona sisombululo. Le nkqubo yexesha elide yonyango inokubandakanya ukuthathwa kwemichiza yokulwa nezifo mihla le ukulwa nezifo.
Kwiimeko ezinzima, unyango lwe-immunoglobulin lunokubakho
Unyango luyanceda ekuqiniseni amajoni omzimba, ke loo nto inceda umzimba ekulweni usulelo ngcono. Kubandakanya ukudibanisa umxube wee-antibodies (immunoglobulins) okanye isicombululo phantsi kolusu lwesigulana, esisihlunu okanye emithanjeni yakhe.
Ukusetyenziswa kwe-IgG powder kusenokubona umntu othile ukuba uyaphola kubuthathaka be-IgG.
Iziphumo zeziphumo ze-Immunoglobulin G
Emva konyango lwe-immunoglobulin, umzimba wakho unokuphendula kakubi kwi-immunoglobulin g.
Ezona ziphumo ziqhelekileyo ze-immunoglobulin g zibandakanya:
Ubuhlungu kwindawo yokutofa
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-immunoglobulin g zibandakanya:
Xa i-immunoglobulin igG iphezulu kakhulu
Ukuphezulu kakhulu IgG amanqanaba anokubonwa kwi-systemic lupus erythematosus, atrophic portal vein, cirrhosis, hepatitis esebenzayo engapheliyo, isifo samathambo, isystemic endocarditis, myeloma emininzi, i-non-Hodgkin lymphoma, hepatitis, cirrhosis, kunye ne-mononucleosis.
Kakhulu inqanaba le-IgG ye-immunoglobulin inokuqatshelwa kwi-IgG-, ezinye izifo ezosulelayo (ezinjenge-HIV kunye ne-cytomegalovirus), ukuphazamiseka kweseli ye-plasma, isifo se-IgG monoclonal gamma globulin nesifo sesibindi.
Xa i-immunoglobulin igG iphantsi kakhulu
i-immunoglobulin g yamanqanaba aphantsi ibeka umntu emngciphekweni ophezulu wokuhlaselwa sisifo esiqhubekayo. I-immunoglobulin g yamanqanaba asezantsi anokubonwa kusilela kokungasebenzi komzimba, isifo se-immunodefitness, i-non-IgG ye-myeloma emininzi, isifo esixineneyo sesifo, isifo sentloko yokukhanya okanye isifo se-nephrotic.
Amanqanaba asezantsi kakhulu e-antibody anokuthi abe zizaziso kwiintlobo ezithile zesifo sokuvuvukala, ukulimala kakhulu, i-alzgicgic eczema, isifo sezintso, i-sepsis, ukungondleki, i-pemphigus, i-music tonic kunye nokungasebenzi kakuhle.
Xa i-immunoglobulin IgG ilungile
ukuba immunoglobulin IgG intle kwi-antigen yosulelo efana ne-Covid-19 okanye i-dengue, luphawu lokuba umntu ophantsi kovavanyo wayengaosulelwa yintsholongwane ehambelana nayo kwiiveki nje ezidlulileyo. Kwakhona, i-immunoglobulin g isiphumo esibonakalayo sibonisa ukuba kunokwenzeka ukuba loo mntu wafumana ugonyo kungekudala ukubakhusela kwiintsholongwane.
Ke ngoko, i-immunoglobulin g isiphumo esisiphumo luphawu lokunyuka komngcipheko womntu kusulelo olunxulumene ne-antigen enegalelo kuvavanyo oluqinisekileyo. Oku ikakhulu ukuba iziphumo eziqinisekileyo azikho ngenxa yesitofu sokugonya.
Ngoba Is I-Immunoglobulin G (Igg) Ngaba ibalulekile kwimisebenzi yoBomi?
I-Immunoglobulin G (IgG) ibaluleke kakhulu kwimisebenzi yobomi kuba idlala eyona ndima ibalulekileyo ekugcineni abantu besempilweni kwaye bakwazi ukuqhubeka nemisebenzi yabo yobomi ngokuthelekisa enye i-Immunoglobulins.
Ngokuphawuleka, ii-antibodies ze-IgG zikhona kulo lonke ulwelo lomzimba, zitsho iinyembezi, umchamo, igazi, ukukhutshwa kwilungu lobufazi kunye nokunye. Ukujonga oku, akumangalisi ukuba zezona zinto zixhaphakileyo zi-antibodies, zibalelwa kuma-75% ukuya kwi-80% yenani lilonke lama-antibodies emzimbeni womntu.
Ii-antibodies zikhusela amalungu omzimba / amalungu adibene noku kululuku kusulelo lwentsholongwane kunye nentsholongwane. Ke, ngaphandle okanye ngamanqanaba angonelanga e-IgG, awunokwazi ukubakho ngokwaneleyo ukuya kwimisebenzi yakho yemihla ngemihla ngenxa yosulelo olwenzeka rhoqo.
Ukongeza, i-IgG ibalulekile ekuzaleni komntu. Ukuba yeyona nto incinci kuzo zonke i-antibodies kwaye inesakhiwo esilula, kukuphela kwento enokuthi ingene kwi-placenta kumfazi okhulelweyo. Ke ngoko, yeyona nto ichasene nokukhusela umntwana ongekazalwa kusulelo lwentsholongwane nakwintsholongwane. Ngaphandle kwayo, abantwana abaninzi abangazalwanga baya kuba semngciphekweni omkhulu wokukhula kwiimeko ezahlukeneyo zempilo, ezinye ezinokubeka ubomi babo esichengeni okanye ubomi bonke.
Is Kukho ukusebenzisana phakathi kwe-Immunoglobulin G Kwaye iLactoferrin?
Zombini i-immunoglobulin G kunye ne-lactoferrin zombini ziimpawu zendalo zobisi lwe-bovine (ebantwini nasezinkomeni). Kanye njenge-immunoglobulin G, izifundo zibonisa ukuba i-lactoferrin ikwabandakanyeka kwimisebenzi eyahlukeneyo yokukhuselwa emzimbeni womntu.
Inceda umzimba ukuba ulwe nezinto ezincinci zentsholongwane ezinje ngebhakteriya, intsholongwane, kunye nosuleleko lokungunda. Ngamanye amagama, iyawomeleza amandla omzimba okusebenza komzimba. Ke, izongezo ze-lactoferrin zinokuphelisa i-immunoglobulin G powder kulo msebenzi.
Nangona kunjalo, i-lactoferrin inomsebenzi owongezelelweyo; ukubopha i-iron kunye nokuhamba.
Kaninzi Ulwazi malunga nee-immunoglobulins
Nini ukuvavanya ii-immunoglobulins?
Ngamaxesha athile, ugqirha wakho unokukucebisa ukuba uye kuvavanyo lwe-immunoglobulin, ngakumbi yena ekrokrela ukuba une-immunoglobulin esezantsi kakhulu okanye kakhulu. Oluvavanyo lujolise ekusekeni inqanaba (isixa) se-immunoglobulin emzimbeni wakho.
Ubukhulu becala, a Uvavanyo lwe-immunoglobulin Kuyacetyiswa ukuba une:
Ukosuleleka rhoqo, ngakumbi i-sinus, imiphunga, isisu, okanye usuleleko esiswini
Ukuqubeka / uhudo olungapheliyo
Ukunciphisa ubunzima obumangalisayo
Intsholongwane kaGawulayo / uGawulayo
Imbali yokugonywa kukhuseleko losapho
Ugqirha wakho usenokukufumanisa kububulumko ukukucebisa ngovavanyo lwe-immunoglobulin ukuba uyagula emva kokuhamba.
Uvavanyo lwegazi lwe-immunoglobulins lisetyenziselwa ukunceda ekuchongeni imeko ezahlukeneyo zempilo ezifana:
Ukosuleleka yintsholongwane kunye nentsholongwane
Ukungafunwa komzimba: Le yimeko ebonakaliswa ngumthamo omncinci womzimba womntu wokulwa izifo kunye nosulelo
ukuphazamiseka kwe-autoimmune njengerheumatoid arthritis kunye ne lupus
iintlobo zomhlaza njenge-myeloma ezininzi
Usulelo losana olusanda kuzalwa
Lwenziwa njani uvavanyo?
Olu vavanyo luhlala lubandakanya ukulinganisa iindidi ezintathu ezixhaphakileyo ze-immunoglobulin; IgA, IgG, kunye IgM. Ezi zinto zintathu zilinganiswa kunye ukunika ugqirha wakho umfanekiso wokusebenza kakuhle kwempendulo yakho yomzimba.
Isampulu yegazi lakho iya kuba ngumzekelo koluvavanyo. Ke ngoko, uchwepheshe weelebhu uya kungena ngaphakathi kwinaliti kwinxalenye yengalo yakho ukuze afikelele kwelinye lamasebe angaphantsi. Emva koko, uchwephesha ovumela igazi ukuba liqokelele kwiityhubhu okanye i-vial efakwe kwinaliti.
Ngenye indlela, ugqirha unokukhetha ukusebenzisa isampulu yeCarbrospinal fluid (CSF) endaweni yegazi kuvavanyo. Ukucaciswa, ulwelo lweCypbrospinal lulwelo olujikeleze intambo yomntu kunye nengqondo. Ingcali yakho iza kusebenzisa inkqubo ebizwa ngokuba yi-lumbar punning ukukhupha ulwelo kumqolo wakho.
Ukukhutshwa kwesampulu yolwelo kunokuba buhlungu kakhulu. Nangona kunjalo, iingcali ezibandakanyekayo kwiinkqubo ezinjalo ze-anesthesia yendawo ukwenza indawo echaphazelekayo yomzimba ingakhathazeki zintlungu. Ke, into yokuqala eza kwenziwa yingcali yeelebhu yakho kukufaka intsholongwane yeziyobisi ebulala umva kumqolo wakho ukubala zonke iintlungu.
Ke, ingcali yeelebhu iya kukucela ukuba ulale kwicala lakho etafileni kwaye ukonyuse amadolo akho kuvavanyo lwakho. Ngenye indlela, unokucelwa ukuba uhlale etafileni. Xa ukwenye yezi zikhundla zibini, uchwepheshe uya kuba nako ukufumana i-vertebrae yakho esezantsi yomqolo.
Okulandelayo kukuba uchwephesha uza kufaka inaliti ephakathi kwendawo yakho yesithathu neyesine ye-lumbar vertebrae. Emva koko, inani elincinci lamanzi akho e -broscospinal aya kuqokelela kwinaliti. Emva kwemizuzwana embalwa, uchwepheshe uya kukhupha inaliti kunye nolwelo oluqokelelwe ngaphakathi kuyo.
Okokugqibela, isampulu yolwelo iya kufakwa kwikhiti yokuchonga egxile kwimunogogulin.
I-immunoglobulin G (IgG) iphakathi kwezinye i-immunoglobulins ebalulekileyo emzimbeni womntu. Ezinye zi-IgA, IgD, IgE, kunye ne-IgM. Nangona kunjalo, kwiintlobo ezine ze-immunoglobulins, i-IgG yeyona incinci kodwa ixhaphake kwaye ibalulekile emzimbeni. Ikho kulo naluphi na ulwelo lomzimba ukuxhasa amajoni omzimba kumlo wayo nxamnye ne-pathogen (bacteria kunye neentsholongwane).
Ukuthoba kakhulu okanye kwinqanaba eliphezulu le-immunoglobulin G akulunganga kwimpilo yakho. Kwimeko yokusilela kwe-immunoglobulin g, a I-IgG powder ithenge kwaye ukusetyenziswa kunokuba linyathelo lokuphola kwakho.
Saadoun, S., Amanzi, P., Bell, BA, Vincent, A., Verkman, AS, & Papadopoulos, MC (2010). Inal-cerebral inaliti ye-neuromyelitis Optica immunoglobulin G kunye nokupheleliswa komntu kuvelisa izilonda ze-neuromyelitis optica kwiimpuku. ingqondo, 133(2), 349-361.
UMarignier, R., uNicolle, A., Watrin, uC., Touret, M., Cavagna, S., Varrin-Doyer, M.,… & Giraudon, P. (2010). I-Oligodendrocyte yonakaliswa yi-neuromyelitis Optica immunoglobulin G ngokulimala kwe-astrocyte. ingqondo, 133(9), 2578-2591.
Berger, M., Murphy, E., Riley, P., & Bergman, GE (2010). Ukuphuculwa komgangatho wobomi, amanqanaba e-immunoglobulin G, kunye namazinga osulelo kwizigulana ezinezifo ezingapheliyo zogonyo ngexesha lokuzinyanga unyango olungaphantsi kwe-immunoglobulin G. Ijenali yezonyango esemaZantsi, 103(9), 856-863.
URadosevich, M., & Burnouf, T. (2010). I-Intravenous immunoglobulin G: Imikhwa yeendlela zokuvelisa, ukulawulwa komgangatho kunye nokuqinisekiswa komgangatho. face sanguinis, 98(1), 12-28.
I-Fehlings, MG, & Nguyen, DH (2010). I-Immunoglobulin G: Unyango olunokubakho lokufumana i-neuroinfigueation emva kokulimala kwentambo. Ijenali yonyango lwe-immunology yonyango, 30(1), 109-112.
UBereli, N., Şener, G., Altıntaş, EB, Yavuz, H., noDenizli, A. (2010). Isininzi (i-glycidyl methacrylate) ubuhlalu obufakwe kwi-cryogels ye-pseudo-ehambelana nobulungu bokuphelisa i-albhamuin kunye ne-immunoglobulin G. Izixhobo zeNzululwazi kunye nezoBunjineli: C, 30(2), 323-329.